Ugbu a eteta Holm Nature! | Holmbygden.se
Ihe na 6 Ka, 2017 site Holmbygden.se
Ugbu a, migratory nnụnụ laghachi, ha 10 ugboro karịa anyị nwere n'oge oyi na anyị ala. Akpa ọtọ bụ nnunnu ojii ugbu a. Ọ bụ Titti na Jørgen Olsson, Östbyn, kọrọ na mbụ; 12/3. Mgbe e mesịrị n'izu nwekwara chaffinch gosipụtara nke ha. E nwere nnụnụ nri njikọ n'ógbè na-akawanye mbụ vårbesöken. Ebe a na Navarn (300 MOEH) ọ bụghị ruo mgbe 19/3 mbu nnunnu ojii bịara.
N'ihi na otu onye na ọkara afọ gara aga, m mere ka arịrịọ ka Nnụnụ na anụmanụ ndị ọzọ na Holm Bygdens homepage (Ọzọkwa na slide magazine). Titti Olsson, Östbyn, na Arnold Johansson, Långliden, bụ ndị gosiri mmasị.
Arnold (82) kemgbe a forester na bayoloji omume ntụrụndụ, ulo ke otu ebe, kemgbe ha bụ nwata. M gara leta ya na April 2016 na gbazinyere ya agwa edetu. O kwuru 20 vårfåglars mbụ mbata na ụbọchị na Långliden n'etiti 1951-2011. 60 afọ ndetu ga-sayensị Mellannorrland na Sweden. Lee, anyị pụrụ ịhụ otú ndị na-abụ abụ lark, Lapwings ibu ụkọ / mgbe e mesịrị na na, kama, bụ nnunnu ojii na chaffinch akpa ke Lidén n'oge opupu ihe ubi ugbu a. Arnold na-edetu e rubere Nlekọta Board na Swedish umu anumanu na osisi Ozi Center (SLU na Uppsala). Swedish Agricultural University (SLU) malitere anyị fenologiprojekt ("Abịa nke spring" n'akụkụ dị iche iche nke mba) na okwu nke ụmụ anụmanụ na osisi. Ọ na-agụnye ụzọ urukurubụba, anu, na, okooko, nnụnụ mbata, igbaze mm ke ebe (ibé) ị na-ebi. Nke a bụ akụkụ nke ndị na-esonụ mgbanwe ihu igwe na Sweden / World.
Titti na Jørgen nwere nwekwara ọtụtụ ugboro hụrụ mpi ikwiikwii na ụwa ikwiikwii mgbe chi jiri na infields n'akuku Ugwu nke Holmsjön ebe ufọt ufọt April! Christin "Titti" Olsson, Östbyn, onye nna na-arụ ọrụ na Sundsvall F.D.. "Bird akụkọ mgbe" na 80- 90 talet.Nils Lundmark, wee na ozugbo na chọrọ re-ha guzosie ike nnụnụ mmasị. Nisse, ndị nwụrụ 2006, nọrọ a otutu oge na Holm- na Lidén ebe nke atọ ndị yiri nkata na gbanyere mkpọrọgwụ n'obi ikwiikwii na-etinye elu na narị abụọ feeders n'ógbè anyị n'oge 80-90 narị afọ (ikwiikwii na dippers). n'okpuru sina 60 afọ dị ka onye ornithologist etinye Nisse n'elu 1600 obere nnụnụ feeders na banyere 400 ikwiikwii. Ọ ringed n'elu 12.000 nnụnụ.
Årsvädret na Holm bụ mma maka fauna (Ọzọkwa Flora). August na September e ọkụ karịa nkịtị ma mee ka ndụ nke ugwu nta ndị dị elu karịa n'oge a nkịtị n'oge okpomọkụ. Nọmalị na-adị ndụ na Chick si a-awụba n'oké osimiri n'afọ mbụ. Ugbu a, anwụghị kasị enwe mmetụta ọsọ ọsọ tupu aga were n'elu ke mgbụsị akwụkwọ.
The undersigned nwere atọ ndị yiri nkata nke ozuzu nnụnụ na mpaghara ebe ọ bụ na 2000 (na Storsten Ndanda elu na Storflon, n'ebe ugwu nke Vike) na Lokåsen na Nordanede (n'ebe ndịda nke Holm).
Leaderboard na inventories ke akpatre 4 afọ anya dị ka igbe dị n'akụkụ. Ha si anyị ọhịa ebe, na a 16 nnụnụ kasị banyere 80 % nke a na-ahụ Holm oké ọhịa.
The mgbakwunye n'okpuru 13 ndị kọrọ ha chọpụtara na Holm n'oge afọ (7 ulo ke Sundsvall!!?). Ebe i nwere ike ịhụ ọtụtụ ihe na-kọrọ na Holm.
Ma anyị na-echere gị sightings n'oge 2017. Biko kpọtụrụ Titti na m ihe na-eme ka ha ghọọ a na-ede akụkọ ihe na-eme na uwa na Holm. Anyị na-enyere gị n'ihu.
ịhụ Odide Ntụkwasị:
Kọrọ nnụnụ Holm 2016
Na oyi, na "ụkọ nnụnụ", dị nnọọ 10 % tụnyere okpomọkụ. Lee igbe dị n'akụkụ.
Ụfọdụ pụrụ iche kwuru n'oge 2016 bụ Golden Eagle na nesting oge dị n'oké ọhịa dị n'ebe ugwu nke Holmsjön. Titti na Jørgen i Östbyn nwere kestrels nesting na a nnụnụ akwu n'elu ala ruo ọtụtụ afọ. Ọzọkwa, ha nọ ugbu a spring 2017 nwere ma ala ikwiikwii na hornuggla ala ahịhịa juru na Holmsjön nso n'ebe obibi ha.
Ngwangwa / nọ n'ihe ize ndụ nnụnụ, nkịtị na Holm
Miljödepardementet nwere, via EU, en S. K. Red List na-emetụta ụmụ anụmanụ nile- na växtarterter European ndepụta egwu umu.
ngụsị akwụkwọ bụ:
nso egwu (NT na Mgbakwunye)
ngwangwa (Vu na Mgbakwunye)
nọ n'ihe ize ndụ
Ọtụtụ nke nso egwu na ngwangwa nnụnụ nwere a dịtụ mma lanarị ebe ke Holm ebe.
Pịrị ka enlarge ma ọ bụ hụ na-ekekọta maka PDF format: Ngwangwa ma nso egwu umu ke Holm
"The ochie na Navarn"
Kọọrọnụ nnụnụ sightings anyị:
Ihe mgbaru ọsọ bụ na-etolite a ibu na netwọk na-amalite ihe oyiyi nke umu dị na ebe. Site na ndọtị, netwọk ga-akp ka mammals, ụmụ ahụhụ na osisi iji nweta a mbara picture nke ọnọdụ ke edere edere apịtị ebe obibi. Ma ọ bụ banyere ihe na-enye gị mara nke mere na anyị nwere ike ịgbatị uwa Nche.